Mashati ePolo → Chipfeko chekusimudzira • nyanzvi P & M machira emakomputa
Polo shirts ivo vakakurumbira kwazvo pakati pekutunganidzwa kwematsutso uye zhizha, kwete chete zvakavanzika, asiwo nebhizimusi uye zvinangwa zvekushambadza.
Mapipi ePolo anogona kuchinjika zviri nyore kuzvinhu zvega zvega uye zvinotarisirwa nekuda kwebasa rekushongedza komputa, iri fomu rakasimba uye rakashongedza rekumaka.
Kugutsikana kwevatengi ndiko kwekutanga kwedu.
Ichi ndicho chikonzero nei tichigadzira madhairekitoriiti ega ega nekutarisisa zvese zvakadzama. Isu tinopa kwete chete yepamusoro, asiwo yehunyanzvi basa. Mutengo kombasi yemakomputaiyo iyo polo mashati ndeimwe yemachira akanakisisa nekuda kwegirama yavo, zvinoenderana nekunetseka kweprojekiti uye nehuwandu. Kunyange zvakadaro, mutengo wekuraira unogona kuzivikanwa kubva pakutanga chaipo pane hwaro hwegirafu yakagamuchirwa yemubatanidzwa.
Polo mahembe - epamusoro-kirasi zvigadzirwa
Kushambadzira zvipfeko uye machira anofanirwa kuve akagadzikana, uye panguva imwechete nyore, kana isu tichida kuti chiratidzo chizivikanwe nemhando uye nehunyanzvi.
Polo shiti inowanikwa mune yedu shopu yakagadzirwa neyemhando yepamusoro zvigadzirwa zvinowirirana nemushandisi uye zvinomubvumira kusununguka kwekufamba.
Iyo yekushongedza yekushongedza yezvigadzirwa inoita kuti ive nguo inozoshanda mumaindasitiri akawanda akasiyana. Inotaridzika zvakanaka mune yega shanduro. Maalves akagadzirwa neanorema machira akaoma kukuvadza. Kuvageza kakawanda hakuunzi kutyisidzira. Izvo zvipfeko zvinochengetedza zvivakwa zvavo kwenguva yakareba, izvo zvinovimbisa kukosha kwekutenga. Icho chimiro chakanakira vanhu vanoisa yavo bhajeti zvine hungwaru.
Mapipi ePolo anoshandisirwa nechido sechipfeko chevashandi, kunyanya museteki, i.e. nezvinhu zvezvipfeko zvemwaka unotonhora zvikuru, s.k.k. ganda, asi zvakare inobatwa seyegadhi yemakambani kune vatengi kana makondirakiti.
Mashandisiro avo pamwe nekumonera anoshandawo panguva dzakasiyana siyana dzezviitiko kana semubairo mumakwikwi. Izvo zvese zvinoenderana nepfungwa yeiyo mhando. Sezvauri kuona, iyi nzira inowanikwa yekuwana kufarira uye kuzivikanwa kubva kune vateereri vako.
Mhando dzakasiyana siyana
Pakati pehembe dze polo pane mamodheru evarume, vakadzi, vana uye wepasirese - unisex.
Mhando dzose dzinowanikwa mune dzakasiyana siyana dzemavara, zvichiita kuti kusarudzwa kweT-shati kune mamiriro nenzvimbo, zvinoitawo mukana wakakura. Reflective mhando inogadzira rakakosha boka rezvigadzirwa, nekuda kwazviri kukwanisa kuwedzera mwero wekuchengetedza munzvimbo yebasa.
Boka redu richafara kukubatsira iwe kusarudza icho chigadzirwa chakakodzera uye kuchiita pachako. Ma prints ese akagadzirwa mumba medu yekushongedza anoitwa pahwaro hwetekinoroji yemazuva ano. Isu tine epamberi yemuchina park inotipa basa rinoshanda uye yakakwira mhando kune vatengi vedu.
Iyo yakazara yakazara yemhando inogona kutengwa zvese muchitoro chedu chepamhepo www.pm.com.pl kana muchitoro chedu paAllegro "PRODUCER-BHP". Kana iwe uchida kuona iyo yekugadzira basa uye usvike pakuziva samples yedu yekuraira emadhiya, tapota shanyira tafura yedu kuti uwane zvimwe firmie.
nezvehembe ye poloizvo zvinofamba zvakanaka nehembe re polochekupfeka nehembe ye polochekupfeka nehembe ye polozvekuita nehembe ye polouko kwakanaka polo shatikupfeka sei hembe dzehembekugeza sei mahembe e polokuayina sei mahembe ehembehow kupeta polo mahemberudzii rwe sweatshirt yehembe ye polokureba kwehembe dzepolorudzii rwehembe dze poloko mboro hembe shanguchii bhurukwa rehembe ye polopolo yehembeshangu dzepoloadidas polo nhembe pamwe nekudhindahembe dzevakadzi dzevakadziVakadzi polo mahembe ane akadhindapolo polo mashati ane chinyorwamichero yeiyo loom polo shati ine chinyorwapolo hembe kupipolo hembe kupfekalacoste polo shatipolo yehembeLacoste polo mashatipolo dzehembe dzevanhu dzakadhindwashanda polo shirts nekudhindapolo shati nemapepapolo shirts ine allegro anodhindapolo shati neBydgoszcz anodhindapolo shati nemutengo anodhindwapolo mahembe ane vakadzi anodhindapolo shati ine chinyorwa chevanapolo shati nekambani anodhindapolo mahembe ane physiotherapist anodhindapolo shati neKrakow anodhindapolo shati nechikepe chakadhindwapolo shati neLublin anodhindapolo shirts nekudzivirira kudhindapolo shati pamwe nemukoti anodhindapolo shati neprinta poznańpolo shati neWarsaw anodhindapolo shati neako akanyorwapolo mahembe ane akadhinda wrocławpolo shati neako anodhindapolo shati neayo allegro anodhindapolo shati nemapepa ako eWarsawPolo hembeT-shirts neako polo anodhinda